ऒऎ दिदी घर आईज रे हेल्लो भन्न पा,छैन बहिनीले एकै स्वासमा भनि, म हस्पिटलमा छु किन ? मैले भने थाहा छैन खोई तँलाई माग्न मामंफेदेखि मान्छे आउने रे ! म छक्क परें ..मैले अब दुई वर्ष मेरो स्टाफ नर्सको प्राक्टिस छ तेस्पछि मात्र बिहे गर्ने भनेको थिएँ राजालाई !
अनि केटा को रे ? मैले सोधें ,खोई मलाई के था ? तेरै केटा होला नि ! उसले भनि र फोन राखी, कति पल्ट राजा र म बिचको ईमेलहरु बहिनीले चोरि चोरी हेरेकी थिई …बेला बेला फोनमा राजा भेना भन्दै जिस्क्याउने पनि गर्थी !
म ड्युटी सकेर कोठा आएँ तर बिहेको कुरो सुनेर कस्तो दिक्क लाग्यो | मेरो बिहेको कति हतार पर्या होला सबैलाई ? काम नपाएर ? गुनगुन गर्दै इमेल चेक गर्न बसेको ,राजाको मिस्स कल्स देखें कस्तो खुशी लाग्यो | उसले मलाई फोन गर्न छाडेको पुरै १० दिन भाको थियो, मलाई एक किसिमको नमज्जा लागिरहेको थियो उसको यो हेपाईदेखि मलाई सताएर कहाँ हासिराको होला नि ! आ…म पनि गर्दिन ,डाईल गरिसकेको फोन पनि अफ गरेर ओछ्यानमा पसें | ईमेल पनि हेर्न मन लागेन ! सोच्दै
थिएँ कुन बेला मलाई फकाउन निन्द्रा आयो थाहै भएन |
टिर्र्र्र.र्रर….टिर्र्र्र.र्रर…..फेसबुक मेसेन्जर बज्यो छामेर मोबाईल उठाएँ ! सुस्तरी हाई ….मिठो कताकत काउकुति लाग्ने सुस्केरा जस्तो सरिर नै सिरिङ्ग हुने आवाज आयो ! आँखा मिच्दै हेरे फोनमा राजा रहेछ ! रिस उठ्यो ! आ…म पनि के कम दंग्याई दिएँ, तर एकदम माया गरेर फोन काट्ने बेला भने …बदमास ! तुरुन्त फेरि बज्यो फोन उठाइन, तर नउठाई पनि बस्न सकिन कस्तो माया लागेर आयो ३ मिस्स कल्स पछि बल्ल उठाएँ | hi, how are you ? उस्ले भन्यो ..एकछिन बोल्नै मन लागेन चुप्प लागेर रुईरहेँ उताबाट उस्ले सोध्यो..आरेरेरेरे ….के भो ? कुमाक्ली !
केहि भनिन रोई मात्र रहेँ, उस्ले फेरि भन्यो लौ लौ ..मैले कान समाएँ ..हेर यहाँ उठबस गर्दैछु ..उस्ले तेसो भन्दै स्काईपमा भिडियो कल गर्यो ! हेरेँ ऊ सांच्ची बस्दै उठ्दै गर्दै थियो थाम्नै सकिन झन् नानिझै ग्वाँ ग्वाँ रुन थालेँ | म जस्तै, ऊ पनि अति कमलो मनको छ अति माया लागेर आयो तर पनि म रुनुको कारण भनिन् मैले | सायद ! सारै आत्तियो मेरो अचम्मको रुवाई देखेर | उस्ले डाईरेक्ट फोन गर्यो, उठाउन मन लागेन उठाइन ! म सारै अप्ठ्यारोमा परेँ, बहिनीको कुरो सुन्दा, माग्न आउने राजै हो कि जस्तो लागे पनि कन्फ़म भने थिएन तेसैले भनिन । मलाई बेला बेला भन्ने गर्थ्यो म बाहिर भएपनि के भो र म घरबाट माग्न पठाएर बुक गरिराख्छु तिमीलाई ,म भन्दा चाँडो कोहि आईदियो भने फेरि ? जिन्दगी भर म, को संग झगडा गर्नु तिमी भन्दा ठुलो सत्रु यो संसारमा कोहि छँदै छैन ! उसको यस्तो बोल्ने बानीले मलाई हुरुक्क बनाउथ्यो ! उसको ३ बर्षको ईञ्जिनियरिङ् कोर्ष सकेर क्रोसियाबाट फर्कने कुरो पनि चल्दैथ्यो | फिंगर क्रस …फिंगर क्रस ऊ मलाई उताबाट यसरी जिस्काई रहन्थ्यो ! हाम्रो ब्याचलर सकेर क्याम्पस छाड्ने दिनको अघिल्लो साँझ हाम्रो फेर्वेल पार्टी थियो, खान पिन पछि साथीहरु सबै नाच्न गाउन थाले, हामी भने कसैले नदेखी सुटुक्क भागेर कलेजको छात् मा पुग्यौ ! हामी दुबैको धड्कन बढिरहेको थियो हाम्रो छुट्ने दिन सम्झेर, लाग्दै थियो कहिले उज्यालो नहोस र यो ठाउ छाडेर जान नपरोस | मलाई राजा बिना एक्लो बस्ने बानी छुट्टी सकेको थियो | छुट्टिनुको पिडामा म यति छटपटीएको थिएँ ,,आफैलाई सम्हाल्नु नसकेर रुँदै उसलाई झ्याप्प लंग्ग अंगालो हालें, उसले पनि मेरो कपाल मुसार्दै अंगालोमा कस्यो !
हामी दुवै एक अर्काको अंगालोमा लिप्त भयौ र हरायौ एकआपसमा। आकाश माथिबाट ताराहरु सरमले टुटीरहेका थिए ..त्यसैबेला मैले आँखा बन्द गरेर फिंगर क्रस बनाऊ र आफुलाई मन परेको विष माग …प्लिज राजा छिट्टो छिट्टो …तारा टुटेर धर्तीमा झर्दैछ, मैले यसो भनेको थिएँ, हो ! त्यहि दिनदेखि ऊ मलाई हरदम फिंगर क्रस….फिंगर क्रस भनेर जिस्काउने गर्छ |
आफ्नै प्रेमीसंग बिबाह बन्धनमा बाधिन पाउदा औधि खुशी थिइन युना । उनि आफुलाई भन्दा धेरै आफ्नो नानीहरुको बाबुलाई माया र विश्वास गर्थिन । बिहे गरेको २३ बर्ष बितिसक्दा पनि श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्धमा केहि कमि महशुश भएको थिएन । युना एकदम खुल्ला हिर्दयकी पन्छी जस्ती र फुर्तिली मेहेनती भएकोले जीवनमा अभाब पनि खासै थिएन । बिहे पछिको जीवन उनीहरुको एकदम सरल थियो । धेरै सम्पति नभएपनि सन्तुस्ट नै थिए । तर मान्छेको जीवन चक्र सधै एकै नाशको कहाँ हुँदोरहेछ र ? युनाको जीवनमा पनि तेस्तै भयो २०५२ सालमा युनाको कोखबाट पहिलो छोरी जन्मियो घरमा रौनक छायो । सबै खुशी भए पहिलो पल्ट छोरी जन्मिदा घरमा लक्ष्मी आउछ भन्ने कथनमा उनि आफुलाई सफल भएको ठान्थिन् । तर पनि हाम्रो समाजलाई लक्ष्मीले मात्र बश नचल्ने हुदा तेस्को लगतै डेढ बर्ष पछि छोरो पनि जन्माउनु पर्यो । तेस्पछिका दिनहरुले युनाको जीवनमा अभावको पोकोहरु बिस्तारै फुकाल्दै लग्यो । समस्याहरुले मुख बहाउनु थाले पछि अभावको आहार बनेर हंशु जापान पुग्यो । उसले बिहे अघिनै आफ्नो बिषय ईञ्जिनियरिङ्ग गरिसकेर सडक विभागमा काम पनि गर्दै थियो। विदेश जाने कुरो उसले कहिले नसोचेको बिषय हुँदाहुँदै पनि अन्त्यमा घरको समस्या र छोरा छोरीहरुको भविष्यलाई कर्तव्य ठान्दै, त्रिभुवन बिमानस्थल बाट २०५४ साल मा जापान उडेको थियो । सानो छोरो च्यापेर युना आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो राजालाई बिदा गर्न आएकी थिई । ५ महिनाको खेलौ खेलौ लाग्ने छोरोलाई एकपल्ट चुमेर ठुलो ढिक्का आशु आफ्नो प्राण प्यारी युनाको हातमा झारेको थियो । त्यो पनि अन्जानमा नत्र कहाँ आफ्नो आँशु देखाएर दुख दिन चाहन्थ्यो र उनी, युनालाई । युना पनि आफ्नो राजालाई एकपल्ट कसिलो अंगालोमा बाँधेर बेस्सरी रोएथ्यो । हंशु ओझेल नपरुञ्जेल आँखा चिम्म नगरी हेरिरही युनाले तर हंसु एकपल्ट पनि पछि नफर्की खुरुखुरु जहाज तिर प्रस्थान गरेथ्यो । आज पनि ती दिनहरु सम्झिंदा हिजो जस्तो लाग्छ युनालाई । जिबनमा कति अतित हरु सम्झना मै खीइन्दै जाने पनि हुँदा रहेछन् । यस्तै सोच्दै घर मै खत्राक खुत्रुक गरिरहीन युनाले ।
घनघोर जंगलको बीचमा पन्छी र बन्य जन्तुहरुको बस्ती थियो । त्यसै मध्ये एक परिवार थियो पंछीको । जहाँ एक जोडी माउका दुईवटा चल्ला गरि चारवटा पन्छी रहन्थे । वरिपरी घना जंगल बीच भएकाले आहार बटुल्न मुस्किल हुने हुँदा प्राय माउ (भाले) टाढा टाढाको फाँटमा जाने गर्थे । तर ती चार पंछीको परिवारमा आहार खोजेर ल्याउने कोहि थिएनन् । माउ भाले एकदमै अल्छी थियो । पोथी माउले कतैबाट ब्यवस्था गरेमा मात्र पेट भरिन्थ्यो । बचेरा ठूला हुदैं गएका थिए । आहार पनि बढ्दै गएको थियो । त्यसैले पोथी माउलाई चिन्ताले झन सताउन थाल्यो । न बस्ने गूड थियो न त आहार नै ।
पोथीले भालेलाई धेरै माया गर्थी । त्यसैले चारो खोज्न र गुड बनाउन कहिले भनिन् । जसोतसो आफैले गुजारा चलाएकी थिईन् । एकदिन ठूलो हुरी बतास् आयो । बचेराहरुलाई पानीले भिजायो । बचेराहरु बिरामी भए । न खाने चारो छ न बस्ने गुड छ । झन् पछी झन् समस्या बढ्दै जाने अबस्थाले पोथी चारो खोज्ने र राम्रो बास स्थान बनाउन र आफ्ना परिवारलाई सुखद जीवन दिने अठोटका साथ बचेँरालाई माउ भालेको जिम्मा लगाएर भुर्र उडेर कोशौं टाढा पुगीन् । हावाहुरी जाडो गर्मि जे जस्तो परिस्थितिमा पनि आफ्ना बचेँराहरुलाई ढाकेर ममताको न्यानो छहारीमा राखेकी पोथी अचानक छोडेर जाँनु पर्दा बचेराहरु आत्तिएका थिए नै भालेले पनि विछोडको नरमाइलो पिडा महशुस गरिरहेको थियो।
त्यो विछोडको पिडा पोथीलाई पनि सहैय थिएन । तर पनि चारो जम्मा गर्ने र सानो गुड बनाएर परिवारलाई हाँसो र खुशी दिने अठोटले रातदिन संघर्ष गर्दै गई । उसैको छिमेकी परेवा पनि चारोको खोजीमा परदेशिएको थियो एकै ठाउँमा हुनाले बेला बखत भेट गर्थे र सुख दु:ख साट्दै रुने गर्थे । परेवा बेला बखत बासस्थान फर्किने गर्थ्यो । उसैसंग परिवारलाई चारो पठाउने गर्थी । उता राम्रोसँग बस्ने खाने गरेका थिए । आफ्नो परिवारले राम्रोसँग खान लाउन पाएकोमा चरी माउ हर्षित हुन्थिन् । दिनहरु यसरि नै बित्दै गए । परेवाको सहायताले पोथीले जम्मा गरेको चारो र गुड बनाउने सामग्री पठाउने गर्थीन् । भालेले अत्यन्तै सुन्दर गुड बनाएर बचेरालाई राम्रोसँग हेरचाह गरेको थियो ।
परदेशमा पोथीलाई सारै दु:ख थियो, तर परिवारको सुखको खातिर सबै दुखहरु तातो पानीमा घोलेर पिउथिन् । बस्ने गुड थिएन । कैयौं पटक शिकारीले गुलेली हानेर घाइते बनाएका थिए । रगतको खोलो बगाएर भएपनि परिवारको लागि निरन्तर लागि परेकी थिई । आफ्ना बचेरा सम्झेर भक्कानिन्थी । उनैको सुखी जीवन बनाउन फेरी आफुलाई बन्दक बनाई रातदिन खटेर चारो बटुलेकी थिईन् ।
लामो समय बित्यो आफ्ना सन्तान कत्रा भए होलान् ? कस्ता भए होलान् ? त्यसै माथिको भालेको सम्झनाले पनि निकै सताउँथ्यो । अब त आफ्नो परिवारलाई खान र बस्न पुग्छ भन्ने लागेपछि पोथी खुशीले तरंगित हुँदै मिलनको मिठो कल्पनामा डुबुल्की मार्दै भाले सँगको सामिप्यता र बचेराहरुप्रतिको ममताले कता कता काउकुती लाउथ्यो । बात्सल्यता झल्काउथ्यो । यस्तै मिठा पलहरु सम्झदै एक दिन भुर्र उडेर आफ्नो गुँढ पुगीन्, मनै भरि खुशीको बहार बटुलेर ।
यो जीवन न हो । आफुले साेंचे र सम्झे जस्तो कहाँ कसलाई पो पुगेको छ र? पोथी घर पुग्दा आफु छाङगाबाट खसे जस्तै भो । आकाशले थिचे जस्तो भयो । अदृष्य पीडाले मुटु घोच्न थाल्यो । साना बचेरा अब ठुला भुरभुर उड्न सक्ने भएका थिए । पोथीले छाडेर गए लगत्तै भालेको मृत्यु भएको रहेछ र एक बिषाक्त सर्पले बचेराको रेखदेख गरेको रहेछ । बचेरालाई आफु जस्तो बिषम बनाएको रहेछ । आफुले कोरलेर सृष्टि दिएकी भए पनि सानैमा छोडेर गइन् । उता भालेको पनि मृत्यु भएकोले राम्रो संस्कार दिन सकेनन् । सर्पले हुर्कायो र आफु जस्तो बनायो । बचेराहरुले गलत सस्कारलाई मात्र बुझे । सर्पले पोथी माउले जोह गरेको चारो र गुड र सबथोक बचेरा समेत हडप्यो । बचेराहरुलाई नै आमाको खिलाफ भड्काएर विरोधी बनाएको रै’छ । स–साना बचेरा छोडेर गएकी होस् । तँलाई हाम्रो माया थिएन र त छोडेर गइस । तैले छोडेको कारणले नै बाउको मृत्यु भयो । र सर्पले पालेर आज हामीलाई जीवन दिएको छ । हाम्रो लागि सबथोक य्यै सर्प हुन् । तँ होइनस भनेर गुडभित्र छिर्ने अनुमति समेत दिएनन् आफ्नी आमालाई ।
बिचरी पोथी जसको लागि पुरा जिन्दगी अर्पेर दुख गरि । उमेर सकियो । रोग लाग्यो । बुढेसकालमा सहारा बन्ने भाले थिएन । बचेराहरुले बाउको मृत्युको कारण आफुलाई ठहराउँदै प्रत्येक बोलीमा बिष उकल्थे । पोथीलाई सहि सक्नु भएन । बचेरा अलग संस्कारमा परेकाले यस्तो अवस्था आयो । कसरी बास्तविकतालाई आफ्ना सन्तानको अगाडी प्रतुत गरौं? कसरी सर्पको कब्जाबाट बाहिर निकालौं भनेर निकै चिन्तित थिई बिचारी पोथी । आखिर मातृत्वको ममता हो । सन्तानप्रति कहिल्यौ गलत भावना पैदा हुंदैन आमाको मनमा । कोसिश गरिरही सर्पको नियत गलत थियो भनेर सम्झाउन, तर सकिन । दिमागभरि विष घोलिदिएको थियो सर्पले । जोडेको सबै गुड चारो सर्पले मेरो हो भन्यो । पोथी (आमा) ले तिमीलाई अलपत्र पारेर छोडेकी थिइन् ।
भालेको मृत्यु पछी मैले स्याहार सुसार नगरेको भए आज तिमीहरु जिउदो रहने थिएनौ, भनेर दिमाग मनमस्तीषकमा विषादी भरेको थियो । बचेरा आमाको बुझ्न नसकेर त्यहि बिषाक्त सर्पको फन्दामा कहिल्यै नउम्किने गरी फसे । बिस्तारै बिस्तारै पोथीले जोडेको सबै थोक सकियो । सर्पले हिनामिना बनायो। जुन अबस्थामा बचेरा छोडेर गएकी थिइ त्यहि अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो अब। उता पोथी अब कमाउने अबस्थामा छैन सिकारीको गोलीबाट घाइते छ । आफ्नो भाग्यलाई धिकार्दै भालेलाई गाडेको चियान माथि थचक्क बसेकी छिन् ऐले । बिगत सम्झेर मुटु भकानिन्छ । जुन बेला बचेराहरु साना थिए । हावा हुरी आउँदा ओथारो बसेर आफु रुझ्दै न्यानोपन दिएकी थीईन् उनले । आफुले नखाएर बचेराको पेट भरेकी थिइन् उनले । बस्ने गुड खाने चारोको अभावमा पनि धेरै खुशी थिए उनीहरु त्यसबेला । आफ्नाको साथ माया र आत्मीयताको बलियो बन्धनले एक परिवारलाई कसेर राखेको थियो । उनै मिठा, रमाइला र प्यारा दिनहरु सम्झिदै मृत्युलाई कुरेर बसिरहेकी छिन् बिचरी पोथी !